Miady ny hanana toerana maro ao anaty governemanta ny HVM noho ity antoko ity mihevitra fa manana ny maro an'isa eny anivon'ny Parlemanta. Any amin'ny laharana faharoa amin'ny isan'ny ministera homena azy ny MAPAR, ministera fito hatreto ; efatra ny ho an'ny TIM.
Raha ny loharanom-baovao dia mety tsy hiditra ao anatin'ny governemanta amin'izany endriny izany ny TIM tarihin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, ity farany izay tsy eto an-toerana amin'izao fotoana izao.
Izay ve no antony tsy mbola nampahafantarana ny fijoroan'ny governemanta iraisana ? Ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina anefa ity hiazo an'i Canada anio alina.